Ny Fiadidiana Ankapobeny ny Fanajariana ny Tany
Famaritana, Tanjona, Anjara asa :
Ny Fiadidiana Ankapobeny ny Fanajariana ny Tany (DGAT) dia tompon'andraikitra manokana amin'ny :
- famolavolana sy fampiroborobona ny fanamafisana ara-paritra sy ara-tsosialy ny hetsiky ny IEM ary koa ny fijerena mialoha sy ny fandaminana ny faritany, ny fampiharana an’ireo karazana vina fampandrosoana sy fanajariana ho an'ny sehatr’asa miankina sy tsy miankina ;
- fanatanterahana ny volavolan’asa, ny fandrindrana ary ny fanaraha-maso ny asa mikasiaka ny fanajariana ny tany ;
- mampihatra ny politikan'ny Minisitera amin'ny resaka fandrindrana sy fanajariana ny tany ho fampandrosoana ny tanàna, ny trano fonenana, ny fitaovana ary fampiroboroboana ny faritra : nasionaly, regionaly ary ambanivohitra ;
- fiantohana ny fandrindrana ny torolàlana sy ny fepetra tafiditra ao anatin'ny fahaizan'ny Minisitera amin'ny resaka fanajariana ny tany sy ny an-dranomasina, ny fampandrosoana ny tanàna, ny trano, ny fampitaovana ary ny fampiroboroboana ireo faritra ;
- famolavolana sy fanaraha-maso ny fampiharana ireo fitaovana fanomanana drafitra ho an'ny faritra, an-tanàn-dehibe ary an-drenivohitra ;
- fampiroboroboana ny fanavaozana ny faritra tafiditra ao amin'ny IEM. Ao anatin'izany ny ara-toekarena, ny tanàna vaovao, ny faritra mitombo ary ny faritra firaisan-kina ;
- fampiroboroboana ny trano fonenana sosialy ary manome an’ireo faritra itsinjaram-pahefana, miaraka amin'ny fotodrafitrasa ara-tsosialy, ara-pitantanana ary ara-toekarena ny ilain’izy ireo amin'ny fisandratan'ny faritany misy azy ireo manoloana ny politikam-pampandrosoana ara-drariny manerana ny faritany ;
- fitarihana fampianarana ho amin'ny fandrindrana ny drafitra ary ny fampandrosoana ny faritany an-dranomasina Malagasy ;
- fampiroboroboana ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina ary koa ny fiaraha-miasa amin'ny lafiny roa ao anatin'ny sehatry ny fampiroboroboana ny trano sy fampitaovana eto Madagascar indrindra amin'ny fampidirana ireo faritra itsinjaram-pahefana amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ;
- fanatanterahana ny fanadihadiana rehetra mifandraika amin'ny fampiroboroboana ny trano fonenana ;
- famolavolana, fandaharana ary fampiharana ny fenitra ara-fampitaovana natokana ho an'ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana.
Ny fisoloana tena ara-teknika ny faritra ny amin’ny fanajariana ny tany dia andraikitry ny Fiadidiana ankapobeny ny fanajariana ny tany.